Tatoazy an-tsipika amin'ny sandry: hevitra, dikany ary maro hafa | Ny fanaovana tatoazy
Susana godoy | | Tatoazy misy endrika, Tatoazy amin'ny sandry
Ianao tadiavina tatoazy amin'ny sandry? Herinandro vitsivitsy lasa izay dia efa niresaka momba izany isika tatoazy minimalista. Ary heveriko fa ny endrika tatoazy izay hitanao anio Ny fanaovana tatoazy araho ity lohahevitra ity, na izany aza, heveriko fa ny fahatsorana (an'ny fisehosehoana) sy ny hakantony izay ampitainy manokana, ny tatoazy tsipika. Ary ny tsipika amin'ny sandry hiresaka isika anio. Na dia toa sarotra be aza ny manao tatoazy, dia tsy misy zavatra mety ho lavitra ny fahamarinana.
Vao niresaka tamin'ny artista tatoazy maromaro tato ho ato dia nisy nanamarika fa misy mpanakanto tatoazy kalitao maro izay mandà tsy hanao an'ity karazana tatoazy ity noho ny fahasarotany. Ny fanaovana "faribolana" izay, raha fintinina, izay asehon'ireto andalana manodidina ny sandry ireto dia tena sarotra. Ary vao mainka aza andramo atao mahitsy tanteraka izy io nefa tsy miolakolaka.
Na dia izany aza, heveriko fa ny ankamaroan'ny ankamaroany dia hanaiky ahy fa ny vokatra atolotray ho antsika ity karazana tatoazy ity dia mitovy fientanentanana sy kanto. Raha ny fanazavana, dia voalaza fa ity karazana tombokavatsa ho an'ny lehilahy ity dia mifandraika amin'ny tontolon'ny pelaka, fa raha ny tena izy dia tsy misy antony mazava tokony hieritreretana izany. Mbola miatrika angano an-drenivohitra vaovao izahay (na eo aza ny maodely pelaka maro nanao tatoazy toy izany).
Hoy aho, manantena aho fa ho tia an'ity ianao galerin'ny tombokavatsa tsipika amin'ny sandry. Raha ekenao, dia afaka manamboatra karazana tatoazy iray hafa amin'ny faritra hafa amin'ny vatana izahay.
1 Ny dikan'ny tatoazy an-tsipika amin'ny sandry
2 Amin'ny faritra aiza amin'ny sandriko no ahazoako tombokavatsa?
3 Fomban'ny tatoazy tsipika
4 Sarin'ny Tattoos Arm misy tsipika
Ny dikan'ny tatoazy an-tsipika amin'ny sandry
Na dia fantatsika aza fa maro ny tombokavatsa tsy misy dikany amin'ny tenany, dia hanana tandindona na hafa foana izy ireo. Marina fa amin'ny tranga maro dia ho isika no afaka hanome izany dikany izany. Ny zavatra inoan'ny tsirairay na ny zavatra niainany manokana dia mety hitarika vokatra tsy manam-paharoa.
Amin'ity tranga ity dia miresaka momba ny a tandindona heloka bevava. Taloha lasa izay, ny olona izay nanao heloka bevava dia nasiana marika tena mitovy amin'ireo karazana tsipika ireo. Mazava ho azy, araka ny lazaintsika, fa lasa ny fotoana ary ankehitriny, izy io dia mitovy dika mitovy amin'ny minimalism. Ho fanampin'izay dia mazava fa mandeha miaraka ny hatsarana sy ny tsiro tsara. Raha tianao ny fomba toy izao dia aza misalasala fa ianao irery no hanana ny teny farany raha ny dikany no resahina.
Amin'ny faritra aiza amin'ny sandriko no ahazoako tombokavatsa?
Raha efa fantatrao fa ny tatoazy an-tsipika dia ho safidinao, ankehitriny dia tsy maintsy misafidy ny toerany amin'ny sandry ianao.
Doll: Iray amin'ireo tatoazy malina kokoa fa miaraka amin'izay dia sarotra noho isika. Ny saribakoly dia manohana foana ireo endrika tsotra misy heviny betsaka nefa tsy lehibe kokoa. Ny tsipika na ny roa amin'izy ireo dia mety tsara amin'ity faritra ity.
Mandritra ny fotoana: Eto dia afaka miloka amin'ny famolavolana mitovy amin'izany ianao. Andalana roa tsara miaraka Izy ireo dia mety ho safidinao tsara indrindra, na dia tsy tokony hohadinoinao aza fa mahazatra ihany koa ny mahita ny fomba roa ny sakany mampifanaraka an'io faritra io. Hoatran'ny hoe manao fehin-tànana mahafinaritra ianao.
Faritra anatiny: Amin'ny maha maodely tany am-boalohany antsika dia nahita ihany koa isika a tsipika izay miampita avy any ambony ka hatrany ambany amin'ny sandry. Mazava ho azy, ao amin'ny faritra anatiny ao foana izy io.
Fomban'ny tatoazy tsipika
Na dia iray amin'ireo fomba lehibe amin'ity tranga ity aza dia io ny tsipika dia mihaingo manodidina ny sandry. ny tatoazy toy ny fehin-tànana Izy ireo dia iray amin'ireo fototra lehibe amin'ity karazana ity. Saingy satria matetika isika mitady ny originality, dia hitohy ho hafa kokoa noho izay eritreretintsika ny safidy.
Tsipika matevina: Afaka misafidy karazana bracelet izay hasiana tsipika roa malalaka sy rakotra. Mazava ho azy, raha toa somary mankaleo izy ireo, dia afaka misafidy fiovaovana noresahina foana izahay. Ny onja sasany dia avela hitsipaka ny fifehezana symmetry.
Tsipika tena tsara: Raha misafidy ireo tsipika tsara indrindra ianao, dia azo antoka fa hahazo tatoazy mihoatra ny iray ianao ary angamba mihoatra ny roa aza. Azonao atao ny mametraka azy eo akaiky dia akaiky ary hamorona vokatra tonga lafatra sy marefo ihany koa.
Tsipika miloko: Na dia rehefa miresaka momba ny fomba minimalista aza dia ampy foana ny ranomainty mainty. Mazava ho azy fa misy ny hevitra amin'ny zavatra rehetra. Raha te-hamorona fironana ianao, dia handondom-baravarana ny loko, miaraka amin'ny brasele izay handravaka ny vodin-tànanao.
Andalana misy haingo: Miampy hatrany ireo antsipiriany ary hamorona fomba manokana. Azonao atao ny misafidy ilay brooch tany am-boalohany izay, amin'ny lafiny sasany, dia milaza zavatra betsaka momba anao sy ny toetranao. Kintana, vorona na inisialy ... manana ny teny farany ianao!
Tsipika misy akony gradient: Mba hahafahantsika mankafy ny maha-izy azy, tsy misy toy ny manao tatoazy andalana iray fa ny manaraka, miaraka a vokatry ny gradient na misy vokany manjavozavo.
Tsipika tapaka: Haingo iray hafa amin'ny fomba tonga lafatra ho an'ity karazana tombokavatsa tsipika amin'ny sandry, dia ny misafidy ireo tsipika tapaka. Tsy voatery hanao karazana hoop feno foana isika, fa afaka mifidy kapoka tsy miankina.
Tsipika miolakolaka: Ie, satria ny fiolahana sy ny onja dia mety ho ny mpiaro ny tsipika sandry ihany koa. Ny mampiavaka azy ireo dia mahatonga azy ireo ho tsara tarehy kokoa.
Na eo aza izany dikany somary manjavozavo izany, izany avy amin'ny kolontsaina japoneyTsy afaka milaza izahay fa ity karazana tatoazy ity dia mampifanaraka ny sandry manontolo mihitsy. Ary koa, tsy manana fahasamihafana lehibe eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy izy ireo. Samy afaka mampifanaraka ny tsirony amin'ny endriny tsirairay avy izy roa. Safidy fototra ho an'ny famolavolana izay tsy mila lehibe na manana loko maro, na habe lehibe aza, mba hisongadinana ho iray amin'ireo ankafizin'ny maro.
Sarin'ny Tattoos Arm misy tsipika
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny fanaovana tatoazy » Karazana tombokavatsa » Tatoazy misy endrika » Tatoazy vitsivitsy amin'ny sandry
Josh germosen dia hoy izy:
Ny antony ifandraisany amin'ny tontolon'ny pelaka dia satria io vondrona io no nahatonga azy ireo ho lamaody. Satria? Eny, satria hatramin'ny 2013 raha samy nametraka ny sary mahazatra ny = manondro ny fankatoavana ny fanambadiana pelaka. Betsaka no nanomboka tamin'ny fanaovana tatoazy ny tsotra = mandra-pahatongan'ny maro hanidy azy ireo ary avy teo dia teraka ny firongatry ny dian-kapoka, na dia mazava ho azy aza izany dia zavatra tsy fantatry ny rehetra, izany no antony maro, ohatra, no nasiana marika famantarana an'ny Rosiana mafia nefa tsy fantany, toy ny tsipika maro no manohana ny fanambadiana pelaka na dia mety tsy ankasitrahana aza.
Valiny tamin'i Josh Germosen
Antonio Fdez dia hoy izy:
Marina fa ny tatoazy na tsipika amin'ny sandry dia noraisin'ny tontolon'ny pelaka. Saingy, tsy ity vondrona ity no "nampiditra" an'ity karazana tatoazy ity. Efa nanao tatoazy ela be talohan'ny nanombohany nampiasa azy io. Mazava ho azy fa nanampy betsaka tamin'ny fampitomboana ny lazany izy ireo. Miarahaba anao ary misaotra anao tamin'ny hevitrao ;-).
Valiny tamin'i Antonio Fdez
libny dia hoy izy:
Salama, nahazo tatoazy tsipika fotsiny aho, izay vita amin'ny tsipika matevina amin'ny anaran'ny zanako lahimatoa, tsipika manify izay midika hoe ny fiainako taloha sy taorian'izay, tsy nieritreritra ny hafa fa momba ahy fotsiny aho. ary ny fahatelo manify kely noho ny voalohany ary midadasika kokoa noho ny faharoa amin'ny anaran'ny zanako faralahy, heveriko fa izahay pelaka, na biosexual dia olona tahaka ny olon-drehetra, olombelona afaka sambatra toa antsika koa isika .misaotra anao
Valiny amin'i Libny
Marina ny voalazanao! Nomenao dikany manokana izany ary izany indrindra no anton'izany. Na dia indraindray misy tatoazy sasany misy dikany aza, ny tsirairay dia afaka mandika izany amin'ny fiainany, toy ny nataonao, ho fanajana ny zanakao sy ny tenanao.
Miarahaba anao ary misaotra anao nizara ny hevitrao taminay 🙂
Mieritreritra ny hanao haba roa eo amin'ny hato-tànako aho. Ny iray manify ary ny iray midadasika kokoa, fa ny dikany dia tsy hitovy amin'ny an'ny tontolon'ny pelaka. Samy ho zanako izy ireo. Ny manify indrindra amin'ny kely indrindra ary ny malalaka indrindra amin'ny lehibe indrindra
Hevitra tsara Javi. Azoko antoka fa ho tsara tarehy ny tatoazy. Ankoatr'izay dia hanana dikany manokana izy io. Mirary ny soa indrindra!
Mitovy ihany ny dikany amiko, ao anaty ny dingana aho ... na dia tsy dia liana loatra amin'ny pelaka aza aho
David T. dia hoy izy:
Izany koa no nataoko.
Valiny tamin'i David T.
pasatoox dia hoy izy:
Te-hanao izany aho satria ho ahy dia midika hoe tsotra nefa sarotra izany, satria efa niresaka tamin'ny mpanakanto tatoazy aho ary tsy dia mora ho antsika ny milaza ny manao tsipika mahitsy miverina amin'ny sandry, okay?
Mamaly an'i pasetoox
Raha ny marina, na dia toa tena tsotra atao aza ireo tombokavatsa ireo, dia sarotra be. Ary tsy mora ny manao tsipika mahitsy izay, eo an-tampony, manodina tanteraka ny sandry hamorona ny bracelet. Mirary ny soa indrindra!
Ny dikany dia homen'ny tsirairay araka ny fombany sy ny tsirony avy, ny antsipiriany dia mifanaraka amin'ny andalana ianao ary manana izany, voalaza fa ny sisilianina dia nampiasa tarika mainty tamin'ny sandry ho mariky ny fisaonana ary taty aoriana dia tatoazy ihany koa.
Danae dia hoy izy:
Tiako ny tatoazy manana maro aho, ny marina tiako ny famolavolana tsipika mifanila satria ho ahy ny fanambadiako dia toy izany tamin'ny fotoana iray izay nifanarahanay tsara fa indraindray izy na izaho dia mandalo fijaliana amin'ny fiainana ary iray hatrany ny roa Eo miaraka amina saina mazava kokoa ho an'ny iray hafa dia ny tanjako sy ny fahalemeko. Ary toy izany koa isika fa samy mitondra andalana na lalana mitovy foana
Valiny tamin'i Dannae
Salama. Ny marina dia, tsy mieritreritra aho fa ny fanaovana tatoazy toy izao dia mamaritra ny fironanao hanao firaisana, satria efa niresaka tamin'ny olona heterosexual maro aho izay tia an'ity famolavolana ity ary mety hanao izany izy ireo, misy dikany misy izany ary tokony marihina fa raha noho ny tantara maro dia mampiasa fampiasa zanatany amerikanina latina ary mampiasa tsipika mifanila amin'ny volavolan-kevitry ny fitafiany sy ny zavakantony izy ireo, dia ampiasaina ihany koa ny endrika hamantarana ny vatan'izy ireo amin'ny fombafombam-pivavahana isan-karazany amin'ny andriamanitra, fombafomba ary fankalazana; Efa 2000 taona mahery izao no nanaovan'izy ireo izany, fa marika efa taloha io ary tsy zava-baovao, fa tena haingo.
Raha izaho manokana dia mahitsy aho ary nampiasaiko hanaronana tatoazy iray hafa izay 13 taona mahery izay tena nampidi-doza ary toa endrika tsara noho ny antony tsy dia hitako fa manana tandindon'ny sekta rehetra io. , vondrona, kilasy sosialy na Freemasonry fa mbola mieritreritra aho fa tsy tokony hieritreritra be momba ny hafa ny olona mba hanao tatoazy raha toa ka zava-dehibe ny dikany manokana.
Alexander Nunez dia hoy izy:
Manana faribolana roa manodidina ny sandriko havia aho. Malalaka izay maneho ny ankehitriny ary iray manjavozavo izay maneho ny hoavy aorina.
Valiny tamin'i Alejandro Nuñez
Wigetta: v dia hoy izy:
Manadihady momba an'io aho, satria volana vitsivitsy lasa izay, olona iray noheverina ho malaza, dia nanao horonantsary izay nanambarana azy handoko ny vatany ireo tombokavatany izay tiany hananana, ary samy nanome ny heviny ny tsirairay, afa-tsy ireo dian-kapoka ireo.
Ireo mpankafy azy (anisany ahy), variana amin'ny olana izahay fa Gay izy ary manana mpiara-miasa, izay tsy lazainy na inona na inona, mazava ho azy fa fiheverantsika azy ireo izany, tsy nilaza na inona na inona momba ny maha-Gay, na ny fananana vady, fa , nisy olona nahita sary izay nilazan'izy ireo fa ireo Stripe teo amin'ny sandriny havia ireo dia nanondro ny fironany hanao firaisana amin'ny lafiny Gay, ary, [na dia tiako * aza * - mba hanamafisany fa Gay <3 izy ary ny sakaizany dia "-"] izaho, heveriko fa tsy midika izany.
Misaotra noho ny vaovao izay nanampy ahy be dia be, manantena aho fa tsy nanjary sasatra tamin'ny zavatra nataoko; -;
Valiny amin'i Wigetta: v
Fer901 dia hoy izy:
ny gang bandy mainty dia tsy midika hoe homosexualité, maro ny namako heterosexual no manao azy ireo sy olo-malaza maromaro izay tsy pelaka ary koa tyler joseph sy paulo dybala. araka ny voalaza etsy ambony dia angano an-tanan-dehibe
ANTONIO OSORIO dia hoy izy:
NOHO IZAO IREO LALAN'IZY ROA IREO ROA ARY KARAZAN'IZAO KOKOA AN'NY ANTONAN'IZAO, INDRINDRA NY Enin-taona lasa izay ary ny tsirairay amin'izy ireo dia manome ny dikan'izany tian'izy ireo homena azy ireo ho dikan'ireo ray aman-dreniko ary ny tsipika mena dia ahy! REGARDS !!!!
Valiny amin'i ANTONIO OSORIO
Sarany Fran dia hoy izy:
Araka ny bilaogy hitako, ao amin'ny kolontsainay tandrefana mitafy fehin-tànana mainty nozairina na niraikitra tamin'ny akanjo dia mariky ny fisaonana olon-tiana aorian'ny fahafatesan'izy ireo. Mba hahatsiarovanao fa ny namanao very na olona iray ao amin'ny fianakaviana mihoatra ny faharetan'ny fehin-kibo dia maro ny olona misafidy manao tatoazy mainty amin'ny hoditra. Ho fampahatsiahivana maharitra sy fanomezam-boninahitra ho an'ny olona manokana io.
Izy io dia mifandray amin'ny alahelo sy fijaliana.
Ao amin'ny tontolon'ny tafika dia azon'izy ireo atao ny miresaka ady na zava-bita niainana, na ny fahaverezan'ny namana na namana eny an-tsaha.
Izy ireo koa dia ampiasaina hametrahana tanjona sy antony manosika ny tena manokana. Azon'izy ireo atao ny manondro ny isan'ny fandresena sy ny tanjon'ny tenany manokana izay azon'ny olona iray na mbola tadiaviny ho tratrarina. Fampatsiahivana izany mba tsy hamoizantsika ny zavatra kasaintsika hatao.
Ny foko vazimba teratany sasany dia mampiasa tsipika hiomanana amin'ny ady mba hampitahorana ny mpanohitra azy. Amin'ny hafa, izy ireo koa dia manondro ny toerana ao anatin'ny foko, ny isan'ny tsipika / fatorana ary ny toerana misy ny vatana voamarika, dia taratry ny laharana hazon'ilay mpikambana ao amin'ny foko.
Valiny tamin'i Valor Fran
qkrajotinports dia hoy izy:
Ianao mihitsy no manome ny dikany satria tsy fantatra ny niandohany fa raha nataoko tombokavatsa io dia midika izany fa tiako ho voasokitra amin'ny hoditro io ary ho ahy dia ratra mahazo ahy io ary tsy hikatona mihitsy
Mamaly an'i qkrajotinporta
Salama, nataoko fotsiny izy ireo ary tsy fantatro ny dikan'izy ireo, nataoko tsotra fotsiny satria tiako izy ireo ary mazava ho azy fa samy manome ny heviny ny tsirairay.
Valiny amin'ny CRISTIAN
Ny tatoazy dia tsy misy dikany, ny tatoazy dia natao mba hahafahan'ny tsirairay mametraka ny dikany
Ahoana ny fomba marina anaovana ireo tatoazy ireo mba tsy ho voaolana izy ireo
Salama Carlos !.
Ireo karazana tatoazy ireo dia misy 'fikafika' apetrak'ireo mpanakanto tatoazy. Amin'ny lafiny iray, tsy maintsy misafidy fanjaitra manokana izy ireo hanamboarana endrik'ity karazana ity ary miaraka aminy, nozaza izay mifanaraka amin'ny hatevin'ny fanjaitra. Ankoatr'izay, miaraka amin'ny filaminana tsara, ny 'fihazonana' dia hanampy antsika. Ny tsara indrindra dia izay ahazoana aina kokoa hotazonina. Etsy andaniny, milina nofaritana, manenjana ny hoditra alohan'ny fanaovana tatoazy ny tsipika tsirairay, sns. izy ireo no dingana fototra ilaina mba hahazoana vokatra tsara. Ny fampiharana dia mahatonga ireo karazana tatoazy ireo ho tonga lafatra ihany koa.
Manantena aho fa efa nanazava ny sasany amin'ny fisalasalanao 😉
Misaotra betsaka noho ny hevitra.
Mirary ny soa indrindra!.
Nahazo an'ity karazana tatoazy ity aho tamin'ny tsipika matevina 1 teo an-tànako mba hisolo tena ny fotoana rehetra nanapahako ny tenako sy ireo andro niaretako ary tsy nisy zavatra nateraky ny fahafatesako. Tsy fantatro fa izany no fanehoako ny tatoazy.
Araka ny voalazanao, ny tsirairay dia samy manana ny fanehoana ny tatoazy ary avy eo manome ny heviny avy. Manantena aho fa ireo fotoan-dratsy, izay ifandraisanareo, dia ao aorianay. Mijere hatrany hatrany!
Misaotra betsaka anao nizara ny tantaranao taminay!
Manana teoria iray aho izay ananan'ity lehilahy manao tombokavatsa ity manokana ireo lehilahy izay te hanao totohondry ary izany no mariky ny halehiben'ny tokony hataon'ny tanana amin'ny fanaovana firaisana ara-nofo izay mety ho an'ny lehilahy mahitsy na ho an'ny lehilahy.
Fanangonana tatoazy vatofantsika, tonga amin'ny toerana alehantsika
Tatoazy Aquarius, famantarana ny zodiaka